KAOMININA IVATO : Notokanana tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo ny foiben’ny IRK
Mila ivon-toerana hahafahany mifanerasera mivantana sy mifanakalo hevitra amin’ny mponin’Ivato ny Kandidan’ny IRK, Goddfrein Rasoa-miaramanana. 25 octobre 2019
Noho izany indrindra dia notokanana tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo ny foiben-toerany na ny QG. Tonga teny an-toerana nitokana izany moa ny Kandida Goddfrein sy ny mpandrindra ny Ird eny amin’iny faritra iny. Tsiahivina fa efa ben’ny tanàna nitondra ny kaominina Ivato izy teo aloha. Noho ny fangatahan’ny mponina eny an-toerana sy ny fahitana ny fahapotehan’ny tanànan’ Ivato, vokatry ny gaboraraka nisy dia nanapa-kevitra ny hirotsaka hofidiana indray izy.
“Ivato miarina, Ivato vaovao”, izay no teny filamatra entiny mandritra izao fifidianana ben’ny tanàna izao.
Nitontongana tanteraka ny tanànan’Ivato, hoy izy, satria laharana fahatelo ity kaominina ity nandritra ny fotoana nitantanany azy saingy efa nihemotra laharana maro be izany ankehitriny. “Laharana fahatelo nanerana an’i Madagasikara ity kaominina ity nandritra ny fotoana nitantanako azy, potika tanteraka anefa izy amin’izao ka tsy maintsy arenina indray”, hoy ny fanambarany. Notsindriany teto fa Ivato no vavahadin’i Madagasikara ka tsy maintsy ampandrosoana sy diovina araka izay tratra. Raha mikorontana ny tanàna dia tsy ny kaominina Ivato irery no voatondro molotra fa ny sarin’i Madagasikara iray manontolo mihitsy.
Nanaraka ny fiainam-pirenena…
Nanambara ihany koa ity kandida ity fa na tsy teo amin’ny fitondrana aza izy nandritra ny fotoana nialany tsy ho ben’ny tanàna dia nanaraka ny fiainam-pirenena hatrany. “Raha jerena ny fandehan’ny raharam-pirenena eto Ivato sy ny manodidina dia tsapa fa betsaka ny olona nitaraina. Maro izy ireo no maniry ny hiverenan’ity kaominina ity ho tahaka ny teo aloha nandritra izay ary vonona hampandroso amin’izao fotoana izao”, hoy hatrany izy. Notsindrian’ny Kandida Goddfrein koa fa manana tombony lavitra ny kandida miaraka sy manohana ny fitondrana raha oharina amin’ireo hafa. “Ny Filoha, Andry Rajoelina dia misokatra ho an’ny rehetra, izay olom-pirenena mahatsapa fa tokony hitondra ny anjara birikiny ho an’ny firenena sy hitondra fampandrosoana dia ilaina avokoa”, hoy koa izy.
Tafiditra ao anatin’ireo asa hataon’ity kandida ity ny fandrindrana ny fiainam-bahoaka sy fitsinjovana ny sosialin’izy ireo, famoronana toeram-pialam-boly vaovao ho an’ny tanora, fanatsarana sy fananganana tsena vaovao, fanamboarana ireo lalan-kely anaty elakelan-trano rehetra ao Ivato ary ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana. Amin’izao fotoana izao moa dia efa manadio ny kaominina Ivato manontolo ity kandida ity. Misy ny asa tagnamaro tarihiny miaraka amin’ireo mpiara-dia aminy. Tsy mionona fotsiny amin’ny fanadiovana izy ireo fa mampiasa kamiao maromaro koa hitaterana ny fako.